Furitaan Wadareed iyo Anartist: Shabakado Dhaqameed Bilaash ah oo Furan oo Xiiso Leh | Laga soo bilaabo Linux
Furitaan Wadareed iyo Anartist: Shabakado Dhaqameed Bilaash ah oo Furan oo Xiiso Leh
Maanta waan ogaan doonaa 2 degel internet oo xiiso leh dheeraad ah, waxay qayb ka yihiin kuwa waaweyn bulshada internetka taas oo kobcisa a dhaqan xor ah oo furan, aragti kale oo ah arag, fakar oo samee waxyaabaha qaarkood ama xaaladaha qaarkood. Kuwani 2 websaydhada cusub ee dib u eegista lagu samaynayo waa: «Wada Jir Furan y «Anartist ».
Marka la soo koobo, «Wada Jir Furan wuxuu diiradda saarayaa maalgalinta, taas oo ah, ka caawinta kooxaha iskaashiga ah aruurinta iyo qarash gareynta lacagaha si daah furnaan ah. Halka, «Anartist » Waxay diiradda saaraysaa dhaqanka, taas oo ah, bixinta xubnaheeda, kuwaas oo inta badan ka soo jeeda farshaxanka iyo dhaqanka, qalabka bilaashka ah ee lagama maarmaanka u ah inay ku gutaan shaqadooda.
SUChat: Adeegga farriinta degdegga ah ee baahinta dadweynaha
Intaanan hadalka bilaabin «Wada Jir Furan y «Anartist », sida caadiga ah, waxaan kugula talin doonnaa qaar qoraallo hore oo la xiriira iyadoo websaydhyadii ugu dambeeyay ee qabow aan dib u eegnay. Ahaanshaha noogu dambeeya, websaydhka «SUChat ”, oo aan ku sifeyno:
"Adeeg fariin deg deg ah oo baahinta dadweynaha oo ku saleysan borotokoolka XMPP, kaas oo ixtiraamaya asturnaantaada oo u oggolaaneysa wada xiriirka waqtiga dhabta ah asxaabtaada iyo qoyskaaga adiga oo aan ka walwalin amniga iyo asturnaanta. Abuur koonto, soo dejiso macmiil taageera Jabber / XMPP, kudar saaxiibo oo si xornimo leh ula xiriir." SUChat: Adeegga farriinta degdegga ah ee baahinta dadweynaha
Kuwii kale ee hore waxay ahaayeen:
AsturnaantaTools: Waa degel qiimo iyo waxtar u leh asturnaanta internetka
NoGAFAM: Websaydh xiiso leh iyo dhaqdhaqaaq loogu talagalay Software Bilaash ah
1 Furan Wadajirka iyo Anartist
1.1 Waa maxay Wadajirka Furan?
1.1.1 Sidee u shaqeysaa?
1.1.2 Shabakadaha La Xiriira
1.2 Waa maxay Anartist?
Furan Wadajirka iyo Anartist
Waa maxay Wadajirka Furan?
Sida aad adigu leedahay degel rasmi ah, waxaa lagu sifeeyaa:
"Madal maaliyadeed oo internetka ah oo loogu talagalay bulshooyinka furfuran iyo hufan. Taasi waxay siisaa aaladaha lagama maarmaanka u ah soo uruurinta iyo wadaagista dhaqaalaha la soo ururiyey iyadoo la wada leeyahay hufnaan."
Taasi waa, iyagu waa a degel ku habboon jaaliyadaha (kooxaha iskaashiga, shirarka, mashaariicda laga helo ilaha furan, iyo kuwa kale) aruurinta iyo bixinta lacagta hab hufan oo loogu danaynayo xubnahooda iyo mashaariic diiwaangashan, oo ka mid ah kuwa doonaya inay taageeraan.
«Wada Jir Furan badiyaa ka duwan barnaamijyada kale ee la midka ah, maadaama ay bixiso a daahfurnaan maaliyadeed oo buuxdaTaasi waa, waad arki kartaa halka lacagtu ka imanayso iyo halka ay ku socoto. Intaa waxaa dheer, waxaa loogu talagalay bulshooyinka si joogto ah u soo saara alaabada, loomana sameeyo shakhsiyaad abuure ama olole hal mar ah.
Ugu dambeyntiina, goobta ayaa is-maalgelinaysa iyada oo keliya boqolkiiba in yar oo ka mid ah lacagaha lagu soo ururiyo barxadda, taas oo u dhexeysa 5% iyo 10%, taas oo ku xidhan martigelinta maaliyadeed Oo halkaas gudaheeda, qof kastaa wuxuu wax ku biirin karaa meel kasta oo leh kaarka deynta caalamiga ah ee fudud, ama deeqaha lagu soo qoro lacagta 'Fiscal Host' Horumariyayaasheeda waxay sidoo kale faahfaahin ka bixinayaan in lacag bixinta ay ka shaqeyso dhamaan meelaha ay ka bixiyaan adeeg bixiyaashooda, Stripe iyo PayPal
Shabakadaha La Xiriira
Beeshani waxay leedahay, markeeda, degello kale oo xiiso leh, gudahood a Fur Marti-wadareed Wadareed, kuwaas oo ay ka dhex muuqdaan qaar si toos ah ula xiriira Software-ka Bilaashka ah, Ilaha Furan iyo GNU / Linux, waana sheegi karnaa:
Meel Furan Wadareed: Kaas oo u shaqeeya sidii marti-geliye maaliyadeed oo aan macaash doon ahayn oo kobciya nidaam deegaan oo furan oo caafimaad qaba oo waara.
Furan Wadajirka Yurub: Kuwaasoo u shaqeeya sidii urur aan faa'iido doon ahayn oo xaruntiisu tahay Brussels si ay u soo dhaweyso kooxaha furan ee ka kala yimid Yurub oo dhan.
Midwest Open Source Alliance: U shaqeeynta urur ahaan waxay sare u qaadeysaa waxbarashada, taageerada iyo horumarinta Drupal iyo barnaamijyada furan ee laxiriira bulshada Drupal ee Midwest of United States of America.
Waa maxay Anartist?
"Madal iskeed u maamusho oo loogu talagalay fannaaniinta. Ujeedooyinkooduna waa: Abuur madal loogu adeegayo baahiyaha farshaxanleyda, baahinta awoodda warshadaha dhaqanka, abuurista goobo lagu doodo, barasho iyo taageero is-kaashi ah oo ka dhexeysa farshaxan-yahannada, iyo in la dhiso dhaqan xor ah oo anshax leh oo loogu talagalay is-beddelka bulshada."
Iyaguna waxay qayb ka yihiin «Wada Jir Furan, taas oo lagu arki karo adigoo gujinaya waxyaabaha soo socda isku xirka.
Ugu dambeyntiina, waxaa xusid mudan in Beesha degel-websaydhkani ay leeyihiin yoolka ugu weyn soo socda:
"Nafteena kubixi aalado lidka ku ah hanti-goosiga iyadoo la raacayo mabaadiida dhaqanka xorta ah. Waxaan dooneynaa inaan ka xoroobo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee gacanta ku haya oo kormeera dadka badan. Sababtaas awgeed, waxaan rakibnay (oo aan rakibi doonaa) aaladaha aan ugu baahan nahay inaan ku shaqeyno oo aan ku faafinno farshaxankeenna server-yada."
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ee 2da bog ee xiisaha leh ee «Open Collective y Anartist», kuwaas oo qayb ka ah bulshada weyn ee internetka ee kobcisa dhaqan xor ah oo furan, aragti beddel ah oo arag, fikir iyo wax qabad waxyaabaha qaarkood ama xaaladaha qaarkood; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » dhowr » Furitaan Wadareed iyo Anartist: Shabakado Dhaqameed Bilaash ah oo Furan oo Xiiso Leh